Moonlight (2016) | MM Movie Store
MOONLIGHT မွနျမာလိုပွနျရပါမူ လရောငျဟု အဓိပ်ပါယျရသညျ….လရောငျဆမျးသောညကိုမကွုံဖူးသူမရှိပေ..လရောငျသညျ သကျရှိသကျမဲ့အရာအားလုံး၏ မူလအရောငျကိုမှေးဖြော့လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိသညျ လရောငျသညျ နူးညံသညျ သိမျ့မှသေ့ညျ သို့သျောထိရောကျမှုစှမျးအား ကသိပျကိုကွီးမားလှနျးသညျ
ဒွပျရှိအရာမြားကိုမဆိုထားဘိ ဒွပျမဲ့နှလုံးသားရဲ့ခံစားခကျြကိုပငျ ဆှဲငငျနိုငျစှမျးရှိသညျ ယခုဇတျကား…Moonlight ဟုအမညျပေးထားသော ဒီဇတျကားထဲမှာ အပိုငျး ၃ပိုငျးပါသညျ ကလေးဘ၀ လူငယျဘ၀ လူကွီးဘဝ…. အပြံသငျခါစနုလုံးသားနုနုအရှယျကလေးဘဝမှာလရောငျနှငျ့ အလားသဏ်ဍနျတူသညျ့ ပတျဝနျးကငျြစိုးမိုးမှုကိုစပွသညျ…
အမကေဆေးစှဲနသေညျ အားကိုးရမဲ့ဖွဈနတေဲ့သူ့ကိုရှယျတူလူငယျတဈစုကနာမညျပွောငျခပျဆိုးဆိုးတှခေျေါရငျးအနိုငျကငျြ့ခံရနရေသညျ…..ကလေးရဲ့နှလုံးသားက ဒဏျရာဗရပှဖွဈနသေညျ……လူငယျဘ၀ လူကွီး အခွအေနတှေေ သူ့ရဲ့ရပျတညျပုံတှပွေသညျ……
ဒီကားက နောကျခံတေးသှားက မပါသလောကျ effectနတ်ထိ….မကျြစိပသာဒဖွဈစမေဲ့ အပျေါယံအလှတရားမပါအကုနျလုံးက လူမဲတှကွေီးသရုပျဆောငျထားသညျ….ဒါရိုကျတာကလညျး လူမဲ….သို့ပမေဲ့ LA LA LAND ,HACKSAW RIDGEတို့ကိုကြျောလှနျပွီး အကောငျးဆုံးရုပျရှငျဆု၊အကောငျးဆုံးမှီငွိမျးဇတျညှနျးဆု၊အကောငျးဆုံးဇတျပို့ဆုတို့ကိုရရှိသှားသညျ…..
ဇတျကားရဲ့ဖွဈစဉျတှေ ပေးခငျြတဲ့Messageတှကေ moonlightဆိုသောအမညျနာမနှငျ့လိုကျဖကျလှသညျ….ကိုငျးပရိတျသတျကွီးရေ ခငျဗြားတို့ကြှနျတျောတို့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာရော ဘယျလို လရောငျလေးမြားလှမျးမိုးခံနရေလဲခငျဗြားတို့ကလညျး တခွားသူကို ဘယျလိုအရောငျအဆငျးတှမြေား လှမျးမိုးပေးနိုငျလဲကို ဒီကားလေးကွညျ့ရငျး ဆုံးဖွတျလိုကွပါတော့ဗြာ
MOONLIGHT မြန်မာလိုပြန်ရပါမူ လရောင်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်….လရောင်ဆမ်းသောညကိုမကြုံဖူးသူမရှိပေ..လရောင်သည် သက်ရှိသက်မဲ့အရာအားလုံး၏ မူလအရောင်ကိုမှေးဖျော့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိသည် လရောင်သည် နူးညံသည် သိမ့်မွေ့သည် သို့သော်ထိရောက်မှုစွမ်းအား ကသိပ်ကိုကြီးမားလွန်းသည်
ဒြပ်ရှိအရာများကိုမဆိုထားဘိ ဒြပ်မဲ့နှလုံးသားရဲ့ခံစားချက်ကိုပင် ဆွဲငင်နိုင်စွမ်းရှိသည် ယခုဇတ်ကား…Moonlight ဟုအမည်ပေးထားသော ဒီဇတ်ကားထဲမှာ အပိုင်း ၃ပိုင်းပါသည် ကလေးဘ၀ လူငယ်ဘ၀ လူကြီးဘဝ…. အပျံသင်ခါစနုလုံးသားနုနုအရွယ်ကလေးဘဝမှာလရောင်နှင့် အလားသဏ္ဍန်တူသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စိုးမိုးမှုကိုစပြသည်…
အမေကဆေးစွဲနေသည် အားကိုးရမဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုရွယ်တူလူငယ်တစ်စုကနာမည်ပြောင်ခပ်ဆိုးဆိုးတွေခေါ်ရင်းအနိုင်ကျင့်ခံရနေရသည်…..ကလေးရဲ့နှလုံးသားက ဒဏ်ရာဗရပွဖြစ်နေသည်……လူငယ်ဘ၀ လူကြီး အခြေအနေတွေ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ပုံတွေပြသည်……
ဒီကားက နောက်ခံတေးသွားက မပါသလောက် effectနတ္ထိ….မျက်စိပသာဒဖြစ်စေမဲ့ အပေါ်ယံအလှတရားမပါအကုန်လုံးက လူမဲတွေကြီးသရုပ်ဆောင်ထားသည်….ဒါရိုက်တာကလည်း လူမဲ….သို့ပေမဲ့ LA LA LAND ,HACKSAW RIDGEတို့ကိုကျော်လွန်ပြီး အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆု၊အကောင်းဆုံးမှီငြိမ်းဇတ်ညွှန်းဆု၊အကောင်းဆုံးဇတ်ပို့ဆုတို့ကိုရရှိသွားသည်…..
ဇတ်ကားရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ ပေးချင်တဲ့Messageတွေက moonlightဆိုသောအမည်နာမနှင့်လိုက်ဖက်လှသည်….ကိုင်းပရိတ်သတ်ကြီးရေ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော ဘယ်လို လရောင်လေးများလွှမ်းမိုးခံနေရလဲခင်ဗျားတို့ကလည်း တခြားသူကို ဘယ်လိုအရောင်အဆင်းတွေများ လွှမ်းမိုးပေးနိုင်လဲကို ဒီကားလေးကြည့်ရင်း ဆုံးဖြတ်လိုကြပါတော့ဗျာ